Ihe kacha mma Hummingbird na-eri nri maka ogige gị site na ụdị - Nyocha Nyocha
Ihe kacha mma Hummingbird na-eri nri maka ogige gị site na ụdị
Kedu ụdị ụdị nri nri Hummingbird kachasị mma?
Enwere Akụkụ Doro Anya I Kwesịrị Lookchọ?
Glass Ka Ọ Bụ Plastic?
Agba ọ dị mkpa?
Shadị Onye Na-eri Ahụ Dị Mkpa?
Gịnị Banyere Aesụ na Ants?
Ilekọta Onyinye Hummingbird Gị
Ebe kachasị mma maka nri nri Hummingbird
Otu esi ehicha nri nri Hummingbird gi
Na-egbochi Hummingbird Feeder Leaks
Gịnị Ka I Kwesịrị Inye Nnụnụ Humming?
Best Hummingbird Feeder Nyocha
Nhọrọ Nhọrọ Hummingbird kacha mma
Kachasị mma Pọm Hummingbird Nri Nri
Best Hummingbird Nri maka Windows
Hummingbirds bu ezigbo ndi bi n’ubi. Ọ bụghị naanị na ha nwere ọmarịcha mma na nnukwu nku ha na obere ahụ, mana ha nwere ike ịbụ nnukwu pollinators. Ọtụtụ mgbe, anyị na-agba ha ume ka ha nọrọ site na ịzụrụ kacha mma hummingbird feeder anyị nwere ike ịchọta ma na-enye nri ọzọ.
Ma gịnị n'ezie na-arụ ọrụ iji dọpụta nnụnnụ mmiri? You maara ebe a ga-edebe feeder hummingbird maka ohere kacha mma ịse nnụnụ? Kedu otu esi ehichaa onye na-eri nri hummingbird? Kedu ihe ị ga-etinye na ya iji mee ka nnụnụ gị nwee ahụike ma dị mma?
Aga m atụle ihe na-arụ ọrụ na ihe anaghị arụ ọrụ, yana ma ndị na-eri nri hummingbird iko dị mma karịa nke plastik. Ma karia nke a, aga m enyere gị aka ịmụ etu esi elekọta onye na-enye gị nri hummingbird, otu esi echekwa ya ma hichaa ya, na otu esi agba ndị nnụnụ a mara mma ume ileta.
Glass - Nri akwukwo kacha mma Hummingbird:
Perky-Pet 203CPBR Hummingbird Pinchwaist Nri, Red Glass
Obi ekele Gnome Hummingbird Feeder - Glass Glow Hand - Field Bell Tower
Best Home Ngwaahịa Hummingbird Feeder With Perch
Nku Anụ WWGHF1 Top Wet Hummingbird Feeder, Blue Sunset
Plastic - Kasị Mma Hummingbird Feed:
Ihe Okike mbu 3091 16-Ounce Hummingbird Flower Feeder
Perky-Pet 215P Planter Igbe 3-Ounce Plastic Hummingbird Feeder na Nghọta Mkpanaka
Nature mbu 3055 32-ounce Hummingbird nri
Maggift 16 oz Hanging Hummingbird Feeder na Oghere Uzo 8
Kachasị nri Hummingbird kacha mma maka Windows:
Akụkụ ọla ọla mmịpụta Window Window Hummingbird Feeder, 8-Ounce
Red Kapetị Studios 41254 Hummingbird Feeder Double Window nko
E nwere ọtụtụ ọdịiche dị na ndị na-enye hummingbird feeders ugbu a na ọ siri ike ịhọrọ n'etiti ha. Ka anyị gafee akụkụ ụfọdụ nke ị nwere ike ọ bụrụ na ị tụleghị, ma kwuo maka ọrụ na ihe adịghị arụ ọrụ.
Ihe ndị bụ isi na feeder hummingbird gụnyere ọdọ mmiri na oghere nri ma ọ bụ ọkpọkọ. Mana o nwere ike bụrụ ihe siri ike karịa ebe ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdọta ọtụtụ hummingbirds n'otu oge, ị ga-achọ onye na-azụ nri nke nwere ihe karịrị otu oghere nri. Ndị a ga-achọ ịnweta nnukwu ọdọ mmiri na-edozi yana ijikwa okporo ụzọ.
Ndị chọrọ ihe nlekọta dị mfe nwere ike chọọ nnukwu ọdọ mmiri ka enwee ike ịgbanwe mgbanwe nectar na ụbọchị ole na ole ọ bụla. Ihe dị mfe ihicha dị ka nnukwu iko mmiri nwere ọtụtụ ọnụ bụkwa nhọrọ dị mma.
Naanị na-agbalị iji na-adọta hummingbirds, na ọ bụghị ụdị nnụnụ ndị ọzọ? Họrọ feeder nke enweghị oghere ọdịda dị mfe. Nnụnụ Hummingbird nwere ike iri nri mgbe ọ na-efegharị, ebe orioles ma ọ bụ nnụnụ ndị ọzọ nwere mmasị na nectar chọrọ perch iji daa.
Enwere atụmatụ ndị ọzọ, mana ndị ahụ bụ ihe ndị dị mkpa maka ọtụtụ mmadụ. Gụọ na ịchọta ihe ndị ọzọ ị ga-atụle!
N'ikwu eziokwu, nke a na-abụkarị ihe masịrị gị, ebe ụdị nri feeders abụọ a nwere uru na ọghọm.
Plastic hummingbird feeders nwere ike mebie site na ụzarị anyanwụ ngwa ngwa, ma bụrụkwa ndị nwere ike ịgbaji karịa oge. Ma ha dị arọ karịa ịdị arọ ma dịkwa ọnụ ala, gbakwunyere na ha dị n'ọtụtụ ụdị na ụdị.
Igwe nri hummingbird feeders dị arọ nke ukwuu ma na-eguzogide ọgwụ na mbibi anyanwụ, mana ọ bụrụ na ha daa, ha ga-akụrisị, yabụ ịchọrọ ebe echedoro maka ya. Na mgbakwunye, ha nwere ike ikpo ọkụ karịa ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ha nọ n'anyanwụ. Agbanyeghị, ndị a bụ ihe ịchọ mma karịa ma bụrụkwa obere ọrụ nka.
Ihe abụọ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma, mana ị ga-ahọrọ ihe kacha arụ ọrụ maka ọnọdụ gị. Ejirila m ma nsonaazụ ọma.
Imirikiti ndị na-azụ hummingbird na-acha uhie uhie na ha, dịka a na-azọrọ na agba uhie na-adọta hummingbirds. Nke a bụ eziokwu, ọ dịkwa! Agbanyeghị, agba ndị ọzọ yiri agba nke ifuru ga-arụ ọrụ ọfụma.
Ezigbo ihe mgbaru ọsọ bụ ịnweta ihe nwere agba na-enwu gbaa nke na-adọrọ anya. Ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ na-egbuke egbuke, pink na-acha ọkụ, ma ọ bụ na-acha uhie uhie ma ọ bụ na-acha odo odo, ndị a niile nwere ike ịdọta hummingbird maka ị forụ mmanya. Anwalela usoro doro anya ma gosipụta na ọ nweghị isi.
Ee - udi okwu. Mana ọ kachasị mkpa na otu esi eji ya ma lekọta ya, yana otu esi etinye ya iji rata nnụnụ nso. E nwere ụdị ejiji ole na ole, ha niile na-arụkwa ọrụ.
Styledị kachasị gbasaa bụ feeder hummingbird dị n'elu mmiri. Modelsdị ndị a nwere nnukwu akpa n'elu akụkụ nke feeder, na ịnweta nectar na isi. Ihe ndị a na - eme ka ọ dị mfe ịhụ ka nectar fọdụrụ na feeder gị hummingbird.
Agbanyeghị, ụdị ụdị mmiri dị n'elu na-ehi ngwa ngwa. Ha nwekwara ike ịdị mgbagwoju anya karịa, karịchaa ndị nwere olu karama ma ọ bụ aghụghọ ndị ọzọ. Ndị nnụnụ na-ahụkwa ha nke ọma ma ha nwere ike ịse ihe karịrị naanị hummingbirds maka ihe ọ drinkụ drinkụ.
Styledị kachasị ọhụrụ bụ ụdị efere. Ndị a nwere ebe nchekwa mmiri na tray nri n'elu. Emere ka etinye ya n’osisi ma ọ bụ dọba ya n’elu elu, a naghị ekwụnye ihe ndị a n’elu. Ọ bụrụ na ị dị aghụghọ, ndị a nwere ike gbanwee maka ị kwụgidere.
Ihe ndị eji eme mmiri na-abụkarị opaque. Ikwesiri imeghe ya iji lelee ọkwa nectar. Ha enweghịkwa ikike dị ukwuu. Ebe ọ bụ na ha pere mpe, nnụnụ agaghị ahụ ha ngwa ngwa, yabụ na-ewe oge maka ha iji ya eme ihe mgbe niile. Ma ha dị mfe ihicha ma debe!
Modelsdị ọhụrụ na-etu ọnụ maka ịnọnye windo. Ndị a gbadoro ụkwụ n'ụdị efere nwere isi mmiri, ma tinye iko mmiri nke na-echekwa windo ahụ. Ọzọkwa, ndị a nwere obere ọdọ mmiri, na n'ihi na ha dị nso n'ụlọ ahụ nwere ike iwe ogologo oge iji nweta nleta oge niile.
Ọtụtụ ndị na-eri nri azụmahịa na-eji ndị na-acha odo odo ndanda agba gburugburu nectar oghere ndị yiri ifuru. A theụ, ụkpa, na ụmụ ahụhụ ndị ọzọ na-efe efe nwere ike ịdaba n'ụdị na-acha odo odo.
pink na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Ọ bụrụ na a beụ ma ọ bụ ụmụ ahụhụ ndị ọzọ na-efe efe yiri ka ha na-agbakọta gburugburu nri gị, tụlee iwepu akụkụ edo edo. Nwere ike tee ha agba ọzọ, ma ọ bụ sọpụta ha kpamkpam. Nhọrọ a dị n'aka gị!
Gha mkpụrụ osisi dị mma ga-emekwa ka aesụ si n’ebe feeder dị pụta. Ha na-ahọrọ ahịhịa sitere n'okike karịa ngwọta sugary.
Ndanda na-achọ ihe ndị na-atọ ụtọ mgbe niile, nectar na feeder gị n'ezie ruru eru. Fọdụ feeders dị na ndanda moats na ha. Obere ọdọ mmiri ndị a na-egbochi ndanda iru oghere nri, mana ọ dị mkpa ka a na-ejupụta ha oge niile.
Achọpụtara m na iji ihe na-ekunye nri na teepu nnyapade na waya ga-arụ ọrụ iji gbochie ndanda n'ọnụ mmiri. Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị banyere nnụnụ ndị na-akụda na teepu nnyapade, na-ese ihe ndị na-agba agba nke arborist na alaka ụlọ ebe ị kwụgidere onye na-eri nri gị, na-egbochi ndanda ịbịaru waya ahụ.
Ndị na-eri nri n’osisi nwere ike ịnwe ihe osise arborist na post iji gbochie ndanda ka ha rịgoro nectar. Agbanyeghị, ndị na-eri nri na-anọdụ na tebụl ma ọ bụ na-etinye na windo siri ike iji chebe pụọ na ndanda na-adọkpụ, yabụ ị nwere ike izere ndị ahụ ma ọ bụrụ na ndanda bụ nsogbu.
Ozugbo ịhọrọ ahịhịa hummingbird kachasị mma maka mkpa gị, ị ga-achọ ịma otu esi elekọta ya. Ma ọ bụghị ya, ị ga-azụta ihe ọhụrụ iji dochie ya ngwa ngwa! Nke a bụ ụfọdụ nghọta na ndozi kwesịrị ekwesị nke feeder gị.
Ntinye abụghị naanị ihe dị mkpa maka gị, mana ọ dịkwa mkpa maka hummingbirds, kwa.
Ga acho itinye onye na-atugbu gi ihe onodu onodu ya dika okwesiri, o buru ihe ruru aka iri nari isii nke udi ukwu osisi ma obu osisi. Nke a na - enye ụmụ nnụnụ ohere ikpuchi ma ọ bụrụ na ha chọrọ izo maka obere oge.
Ọzọkwa, ọ dị mkpa ịnwe onye na-enye gị ihe na ebe nwamba ma ọ bụ anụmanụ ndị ọzọ na-enweghị ike iru. Ọtụtụ mmadụ kwụgidere ndị na-azụ ha maka ihe kpatara ya, mana ọbụlagodi na ịnwere ihe nlele nke na-akwụghị ụgwọ, jide n'aka na ọ nọ n'ọnọdụ dị mma maka nnụnnụ ndị ahụ.
Gbaa mbọ hụ na e gosipụtara onye na-eri nri gị. Nke a na-ekwe nkwa na hummingbirds nwere ike ịchọta ya ị haveụ mmanya!
Etinyela onye na-eri nri gị nso nso na windo belụsọ ma etinyere ya na windo ahụ. Ọ bụ ezie na anyị hụrụ n'anya na-ekiri hummingbirds na-abata maka ọdịda, ịnwe nnukwu nyocha-ọhụụ n'akụkụ dị nso nwere ike ịbụ ihe ọghọm ụgbọ elu. Gbaa mbọ hụ na feeder gị dịkarịa ala ụkwụ atọ.
Ọ bụrụ n’ịkwụnye feeder gị n’akụkụ windo ahụ, dobe ya ma ọ bụ jidere ya mma na windo ahụ. Nke a na - eme ka mpio ahụ hụkwuo nnụnụ ahụ ma gbochie nkwekọrịta!
N'ikpeazụ, mara na nnụnụ humming nwere ike ịghọ ókèala. Nwere ike ịnwe karịa otu feeder na yad gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na otu nnupụisi hummingbird siri ike kpebie ịghara ịkekọrịta mgbe ọ na-eleta.
Nhicha gị hummingbird feeder nke ọma bụ mkpa. Osisi shuga na-arapara n'ahụ nwere ike ịzụlite ebu ma ọ bụ mebie ngwa ngwa, ọkachasị ma ọ bụrụ na edobere ya na anyanwụ.
Weta onye na-eri nri n'ime ma jiri mmiri ọkụ sachaa ime ahụ. I werezie nro di nro na ncha efere na-ehicha ya nke ọma. Banye n'ime oghere ọ bụla ebe nectar nwere ike ịdị, ma gbalịa ikpochapụ ihe mgbochi na oghere feeder.
Ozugbo ihichachara ihe dị n'ime na mputa ahụ, gbaa mbọ hụ na ọ nweghị ncha fọrọ. Nwere ike ịme ọtụtụ rinsins. Nakwa, jide n'aka na onye na-eri nri anaghị esi isi ncha ị jiri. Ọ bụrụ na o mee, hapụ ya ka ọ kọọ ma ọ bụrụ na nke ahụ na-ebelata senti. Ncha na-enweghị ume kacha mma.
Ọ bụrụ na ị nwere feeder nke nwere gịrịgịrịgịrị olu dị ka karama olu olu, ị ga-achọ ịmakarị ihe karịa. Mpekere karama brus ejiri nhicha ọnụ nke karama mmiri nwere ike inyere aka na nke a.
Enweghị agba karama? Nsogbu adịghị. Jiri ájá egwuregwu dị ọcha na mgbakwunye na ncha na mmiri. Tinye ya n'ime karama ahụ na mmiri ncha, mechie elu, ma maa jijiji ruo mgbe ájá ga-asachasị n'ime dị ọcha. Ghichaa ya niile ma kpochapu ahihia ncha.
Igbochi nri nri nri Hummingbird
Onye na-eri nri na-eri eri anaghị efufu nectar, kamakwa ọ na-ebute ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ. Ọ nwere ike ịdọrọ pests ma ọ bụ anụmanụ ndị ọzọ a rafuru na ọgbụgba ahụ na-atọ ụtọ, nke nnyapade. Enwere ike imebi ahịhịa ma ọ bụ ahịhịa.
Ma, n'ezie, ọ na-arapara n'ahụ, nke pụtara na ọ na-etinye hummingbird ahụ n'onwe ha n'ihe ize ndụ dịka ọ nwere ike ịdata na nku ha. Ntuchi ọ bụla n’elu ábụ́bà elu ụgbọelu nwere ike ime ka ọ ghara ịkwụsị ma ọ bụ kwụsị nnụnụ hummingbird.
Ya mere, ọ dị oké mkpa iji gbalịa ịbelata nkwụsị dị ka o kwere mee. Ezie na naanị n'ụdị na nectar esite n'okpuru nri tree wepụ leaking kpamkpam, e nwere aghụghọ i nwere ike iji belata na-eri eri si a top ọdọ mmiri nlereanya nakwa.
Gbaa mbọ hụ na onye na-eri nri gị ka nọgidere ọkara. Mgbe ị na - ejuputa feeder gị nke dị n’elu mmiri ọkara ma ọ bụ karịa wee ghaa na isi, ọ na - emepụta agụụ mgbe ọ gbanwere akụkụ aka nri ya. Agụụ ga-ebelata ka onye na-eri nri na-adalata, nke nwere ike ibute nsị.
Ma emejula feeder gị, ma. Nnukwu mmiri mmiri na feeder ga-emekwa ka ọ daa. E nwere n'ozuzu ejuputa akara, na ị kwesịrị ị na-eme ka jupụta na nri larịị maka feeder si imewe.
Lelee akara na feeder mgbe niile iji jide n'aka na ha ka na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, dochie ha. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta akara mgbapụta, ịnwere ike iji teepu plumber na gburugburu nkwonkwo iji nyere aka inye akara dị ọcha.
Gbaa mbọ hụ na onye na-eri nri gị nọ na ndò zuru oke. Ọ bụghị naanị na nke a na-echebe feeder megide mbibi anyanwụ, mana ọ na-ebelata evaporation n'ime mmiri ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ na anyanwụ zuru ezu, nrụgide nwere ike ịbawanye ka nectar na-ekpochapụ ma nwee ike ịgbapụ ngwa ngwa.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile na-enye nri na-eji uhie hummingbird na-acha uhie uhie. Otú ọ dị, e ji esiji ákwà adịghị mma karịsịa maka hummingbirds. Obi dị m ụtọ na ọ dị mfe ịme nectar gị n'ụlọ.
Jikọta otu akụkụ shuga na-acha ọcha granulated na akụkụ anọ mmiri, ma jikọta ya ọnụ ruo mgbe shuga niile ga-agbaze. Nwere ike ịchekwa nectar na friji maka otu izu ma ọ bụ abụọ na-enweghị mmetụta na-adịghị mma, mana ọ bụrụ na ọ malite igwe ojii, mee ọkwa ọhụrụ.
Gbanwee nectar na feeder gị ma ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n'izu, na kwa ụbọchị 2 na ihu igwe ọkụ. Sugars ga-agbari ngwa ngwa na ihu igwe ọkụ ma nwee ike imebi ngwa ngwa. Ọ bụrụ na nectar dị urukpuru ma ọ bụ dị ka ihe ruru unyi, saa feeder ahụ ma were nectar ọhụrụ dochie ya.
Mgbe nectar na feeder amalite imebi, ọ nwere ike gbaa ụka ma mee ka hummingbirds na-arịa ọrịa. Ha nwere ike ịkwụsị otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ, mana mgbe ahụ ha agaghị alọghachi. Ikwesiri idobe ya ohuru ka nnụnnụ na-eleta oge niile.
Ọrịre Perky-Pet 203CPBR Pinchwaist Hummingbird Nri, Red Glass
Easy-jupụta na ọcha obosara-oghere
Kalama uhie uhie na-acha uhie uhie na-adọta nnụnnụ mmiri
Anọ ekara ifuru ekedo ọdụ ụgbọ mmiri na mbughari ...
Lelee Ahịa Ugbu a
Ka anyị malite site n'ụdị ọdịnala nke iko hummingbird feeder - ọkọlọtọ na-acha uhie uhie, mana na iko.
Ihe m hụrụ n'anya banyere ụdị Perky-Pet a bụ na ha na-echebara ihe niile echiche. N'elu elu nke ihe nlere dika emere dika ndanda iji gbochie ndanda iru na oghere feeder. Ihe anọ a nke oghere nri nwere a guardsụ ndị na-eri nri ka idebe a beụ n'ọnụ mmiri.
Versionsdị nsụgharị abụọ dị: ọdọ mmiri doro anya, ma ọ bụ ihe na-acha ọbara ọbara. Ha abụọ dị translucent ka ị wee hụ ọkwa mmiri n'ime. Na mgbakwunye, ha dị mfe ịchụpụ maka ihicha, nke bụ nnukwu perk, na ọdọ mmiri adịghị warara iji chọọ ụzọ nhicha pụrụ iche.
Ihe niile atụlere, ọ bụrụ na m ga - ahọrọ onye na - eri nri, ọ bụ ebe a ka m ga - amalite. Ọ bụ ụdị kpochapụwo nke na-adị mfe ịmị amị na nnụnụ hummingbirds, ma tosie ike ịnọ n'etiti nhọrọ ntanetị kacha mma hummingbird taa.
Gnome Na-ekele - Hummingbird Feeder - Glass Flown Hand - Field Bell Tower - 20 Fluid Ounces Free ...
AKWKWỌ mara mma mara mma iji dọta ...
Ndị ọrụ nyocha ọhụụ: Ngwaahịa ọ bụla ...
OWU SLỌ USLỌ AKA: Mgbe ekele ...
Maka ihe na-enwusi ike n’ogige ahụ, anyị nwere ihe nlereanya a site na ekele Gnome. Na amamiihe agba nke uhie na odo, a fụọ iko hummingbird feeder ga-adọta uche n'agbanyeghị ebe ọ na-etinye!
Ndabere ya sara mbara, na-eme ka a kpochaa ya n'ụzọ dị mfe. Ọ na-ewute m na ọ naghị agụnye ndị na-eche a beeụ ma ọ bụ ihe ndanda ndanda, ma n'agbanyeghị na ọ bụ nhọrọ mara mma. Enwere ike ịchekwa ya nke ọma site na iji waya ma ọ bụ nko nke ị họọrọ, ma na-eme ka ọdụ ụgbọ mmiri hummingbird mara mma.
Ngwongwo Ugbo kacha mma Hummingbird Feeder with Perch - Hand-Blown Glass Feeders | Na-emeso ((Multi-Color) Lelee Ahịa Ugbu a
N’ụzọ ụfọdụ, n’ezie, m na-ahọrọkarị Ngwaahịa Kachasị Mma nke modellọ na-acha ọkụ na-acha ka nke Grateful Gnome, mana n’ụzọ ndị ọzọ ana m enwe nkụda mmụọ.
Dị ka ihe atụ Grateful Gnome, ọ nweghị ndị na-eche a beeụ ma ọ bụ ihe ndanda na-egosi. Otú ọ dị, ihe dị ugbu a bụ ngọngọ karịa akaghị iko iko, nke na-agbakwunye nkwụsi ike na mgbochi mmebi. Ọ dịkwa karịa nke ọzọ, na-achagharị acha odo odo, acha anụnụ anụnụ, ọbara ọbara na odo.
Maka ihe nlere a, mkpesa kachasị m mkpa bụ mkpa mpempe karama kara aka iji mee ka ọ dị ọcha. Olu olu ga-ezuru ya na ọkọlọtọ kichin ọkọlọtọ agaghị arụ ọrụ nke ọma maka ọrụ ahụ. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe na-agaghị ekwe omume ime n’agbanyeghi nke ahụ, ọ na-adịkwa ebube mgbe atụdoro ya!
Mara mma, oké, aka fụọ iko na vibrant ...
Agbanyeghi mmeghe na-eme ka ọ dị mfe njuputa na ...
Silicone gasket na mkpuchi na ifuru maka uko ...
Enweghị m ike ichefu iko ndị na-enye hummingbird feed na nhazi saucer. Wilddị ọdọ mmiri a nke anụ ọhịa nke anụ ọhịa nwere ụdị agba dị iche iche nke kachasị mma nke Kachasị mma, mana na obere ịwa ahụ, dị mfe. Ọ na-eji hanga abịa, mana enwere ike idowe ya na tebụl ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Ihe nlere a bu ihe eji asacha efere, ma obu ihe nkpuru ahihia di na nri ndi ozo nwere ike saa ya. Okpukpo ala a na-achota na o bu ihe na-eri nri hummingbird feeder ọbụlagodi na o juputara na ikike kachasị, ma ọ bụrụhaala na ọ dị ọcha, ọ ga-adịgide ruo ọtụtụ afọ na afọ.
Ọrịre Nature mbu 993091-546 16 oz. Hummingbird Ifuru Feeder, Uhie
Na-acha ọbara ọbara na agba na-adọta ndị kasị ase ...
Na mfe-jupụta obosara-ọnụ ite Reservoirs na ...
Ọdụ ụgbọ mmiri ndị ga-enye nri ga-anabata ọtụtụ ...
Otu n'ime ihe kachasị mma maka nri 16-oz hummingbird a bụ obere profaịlụ ya. N'adịghị ka ụdị ụdị mmiri kachasị elu ọ naghị enwe ogologo ogologo. Kama nke ahụ, ọ na-ahọrọ obosara, na-eme ka ihe ruru iri nnụnnụ iri na-eri nri n'otu oge.
Moat ant na-ewu ewu dị na elu nke feeder mbụ a, na-egbochi ndanda ka ha si na S-hook gụnyere ya. Agbanyeghị, enwere ike iji ya na ọkwa dị larịị n'otu ụzọ ahụ ọtụtụ ndị na-eri nri siri ike.
A tụlere ihe niile, echere m na nke a bụ ihe kacha mma na-enye hummingbird feeder nke ọdịiche plastik, mana ọ dabere na usoro ojiji gị. Maka m, nke a bụ ihe zuru oke.
Perky-Pet 2 Ngwunye nke 215P Planter Box Plastic Hummingbird Feeder with hanger (3 Ounce ikike)
2-ounce ikike hummingbird feeders
Maka ịdọba ama na ifuru na ifuru ...
Mere nke doro anya plastic na-enye gị ohere mfe ...
Na-achọ nhọrọ nke na-achọghị ka a kwụgidere ya n’elu osisi? Mpempe akwụkwọ a nke 3-oz hummingbird feeders na-abịa na nkwado nkwado osisi.
E wuru n'ihu ya bụ onye na - echekwa a toụ iji gbochie ụmụ ahụhụ n'ọnụ mmiri. A mfe akaghị ma ọ bụ abụọ nke nnyapade teepu ma ọ bụ arborist nnyapade agba na nghọta post ga-egbochi ndanda ịbanye na nectar. Enwere ike idobe ihe ndị a n'etiti akwa ifuru gị, na-enye nnụnụ nnweta dị mfe ma nectar ma ifuru.
Nature mbu 3055 32-ounce Hummingbird Feeder
Ọrịre Nature mbu 3055 32-ounce Hummingbird Feeder
Ebe ọ na-acha odo odo na-acha odo odo, ị nwere ọtụtụ nnụnụ iji rie nri? Ọ bụrụ otu a, tụlee nnukwu feeder hummingbird a.
Onyinye okike mbu nke mbu, ihe nlere a bu ihe doro anya nke oma nke edobere na ebe siri ike. A na-ehicha ya ngwa ngwa, ọ bụ nnukwu nhọrọ maka ndị nwere ìgwè atụrụ dum nke obere anụ ọhịa na-efegharị.
Naanị ezigbo mkpesa m nwere bụ na ọ naghị agụnye ant ma ọ bụ mgbochi a otherụ na-abụghị enweghị agba agba, mana ọ bụ ihe dị mma, nke ziri ezi na-agbanyeghị na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma maka ọnụahịa ahụ!
Juegoal Hummingbird Nri (16oz)
hummingbird feeder 16 ounce nectar ikike na 8 ...
Wuru -in moat gbochie ofufe n'ime feeder ...
Nghọta nnụnụ feeder mkpanaka oghere, nwere ike bung on ...
Ka anyị lelee feeder hummingbird ọzọ na-eri nri ugbu a. Onye na-enye hummingbird a n'ọdụ ụgbọ mmiri 8 enweghị okooko osisi mara mma, na-eme ka ọ dị mfe ịdị ọcha ma n'ime ma n'èzí. Na mgbakwunye, ọ bụ naanị ọbara ọbara ma doo anya, na-enweghị agba ndị ọzọ, ya mere a beụ agaghị adọta ya.
Ewubere n’elu elu olulu mmiri na-emighị emi. Echere m na nke dịtụ omimi karị ga-egbochi ndanda maka ntakịrị oge na-enweghị mkpa ka emejupụta ya, mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Enwere ike ịtọ ihe nlereanya a n'elu ala dị larịị ma ọ bụ kpọgidere ya na nko gụnyere, na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nhọrọ n'agbanyeghị ebe ịchọrọ ya.
Akụkụ Jewel Box Suction Cup Windows Hummingbird Feeder, 8-Ounce (Red)
8 ounce ikike na 3 nri ọdụ ụgbọ mmiri
Enwere ike iji ya ma ọ bụ na-enweghị ihu ọ bụla igbochi ...
Zuru oke maka ikiri Hummingbird nso
Chọrọ onye na-eri nri nke na - enweghị ike ịga na windo gị, mana na RV ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri gị? I kpuchiela akụkụ ụfọdụ. Site na nkwado mgbodo nke enwere ike iji ya na iko mmiri ma ọ bụ ihe nkedo, obere nhọrọ a dị n'okpuru 8-oz na-anapụta.
Oghere nri atọ dị na mkpuchi ahụ, ọ dịkwa oke nhicha. Ezubere doro anya nke nwere ihe mkpuchi uhie na-acha uhie uhie iji dọpụta ụmụ nnụnụ, ọ bụ nhọrọ dị mfe ma dị irè nke dị obere nke na-enye ezigbo nsonaazụ.
Hummingbird feeder set gụnyere abụọ nko ...
Jikọtara ihe dịka 4.7 x 3 x 1.8-Inches
Isi nwere ntapu na-eguzogide ọgwụ spout, onye ọ bụla plastic ...
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ bụ nke a mara mma nke nta abụọ feeder. Ọdọ mmiri abụọ dị n’elu kwụgidere na windo nwere akụkụ abụọ, nwee otu oghere na-enye nri na nke ọ bụla. Nta pere mpe pụtara na ọ dị mma ma ọ bụrụ na inwetara nnụnụ ole na ole na yad gị, mana ọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu.
M n'ezie na-amasị visual mkpesa nke ihe nlereanya a, na mmiri iko ọ na-abịa bụ ihe ijuanya na sturdy. Ọ bụrụ na enwere mkpesa dị iche na m nwere, ọ bụ na ọ nwere ike ịpụpụ site na oghere nri n'oge ụfọdụ, yabụ ekwesịghị itinye ebe ebe dripping na-aghọ nsogbu.
Ma ọ bụghị ya, nke a bụ nnukwu obere ihe nlereanya, ọ na-ele anya ma na-eme ihe dịka o kwesiri!
Amaara m na adịchaghị m ịchacha elu nke ịchọta feeder hummingbird kachasị mma n'ahịa, mana enwere ọtụtụ nke na m ga-ejedebe onwe m na nhọrọ m kachasị elu. Na-ahọrọ ụdị mmiri ma ọ bụ ihe nchekwa ala ala, ma enwere atụmatụ ndị ịchọrọ ka onye na-eri nri gị nwere? Mee ka m mara n’ihe a!
10 Shelọ Nchekwa N'èzí: Obere, Nnukwu, Vetikal, & Nchara!
Whiteflies: Otu esi ekpochapụ obere ụmụ ahụhụ ndị a na-acha ọcha
Nne nke Puku kwuru puku: A Sowing Sowing Succulent
Osisi ndị na-awagharị awagharị: Nlekọta, Tydị, na Atụmatụ Na-eto Eto
Bay Laurel: Baytọ ụtọ Bay na Homelọ
ịgbara mmiri site na mmiri na-apụta
otu esi amalite osisi jed
Kedu ihe aphids dị na osisi